Apple - ငါက Mac ပါ ကျွန်ုပ်သည် Mac မှ (စာမျက်နှာ ၁၈)
အကယ်၍ သင်ဤခရစ္စမတ်ကိုမှတ်စုစာအုပ်ဝယ်လိုပါက၊ “ Business Impulse” ဆိုသော site ကိုသင်မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးပါက…
Riven သည် Myst ၏နောက်ဆက်တွဲအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
Riven သည် Myst ၏နောက်ဆက်တွဲအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုလုံးတွင်အများဆုံးသိမ်းပိုက်ထားသောဂိမ်းဖြစ်လာသည်။ အဘို့…
Gamasutra သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၏ထိပ်တန်း ၁၀ ခု Indie ဂိမ်းစာရင်းကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်
ထို့အပြင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်အဆုံးသတ်မည့်ယခုနှစ်အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာများ၊ ဤတစ်ကြိမ်တွင်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း Gamasutra ၏ ...
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက်ထိပ်ဆုံးလုံခြုံရေး ၁၀ ခု၏ပန်ဒါလုံခြုံရေးအစီရင်ခံစာ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အဆုံးသတ်မည့်ယခုနှစ်အနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာများနှင့်အညီ Panda Security သည်၎င်း၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာခန့်မှန်းချက်များကိုကြေငြာလိုက်သည်။
နောက်နှစ်အတွက် iMac နှင့် Macbook Pro ဒီဇိုင်းသစ်များ
Apple က ၂၀၁၁ ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်တွင် MacBook Pro နှင့် iMac မော်ဒယ်များကိုစီစဉ်နေသည်။
Studio Devil ၏ Virtual Bass Amp Pro ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
Studio Devil သည် Virtual Bass Amp Pro သစ်ကို virtual amplifier နှင့် unit တစ်ခုအားစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Oracle က MySQL 5.5 ကို Features အသစ်များ၊
Oracle သည် MySQL အသုံးပြုသူများအတွက်စျေးကွက်သို့အကြီးမားဆုံးသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုကြေငြာရန်ကြေငြာထားပြီးဖြစ်သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်၏အဆိုးဆုံးအချက်အလက်များဆုံးရှုံးမှုဘေးအန္တရာယ်များ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်
ကျွန်ုပ်တို့အားစွန့်ခွာမည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အစီရင်ခံစာများကို ဆက်လက်၍၊ Kroll Ontrack ကုမ္ပဏီက၎င်း၏ကြေငြာချက်အားကြေငြာခဲ့သည်။
ဂျာမန်ကုမ္ပဏီ Media Markt သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များအတွက်ပထမဆုံးအရောင်းစက်များကိုတပ်ဆင်သည်
Media Markt ကုမ္ပဏီသည်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သည့်အခါစီးပွားရေး၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစတိုင်ကိုထိန်းသိမ်းသည်။ A ...
သင်၏ Mac ၏ထပ်တူများကို“ Open with” ဆက်စပ်မီနူးကိုမည်သို့ရှင်းလင်းရမည်နည်း
အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းမွန်သောသုံးစွဲသူများဖြစ်လျှင်သင်၏ Mac ကိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံသည်ဆိုလျှင်“ Open with” ဆက်စပ်မီနူးကိုကြည့်ပါကထပ်ခါတလဲလဲထည့်သွင်းထားသောအရာများနှင့်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ …၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်သင်အသုံးပြုသော MAC OS X မူကွဲပေါ် မူတည်၍ terminal တစ်ခုဖွင့်ပြီးအောက်ပါကုဒ်တစ်ခုကိုသာထည့်ရမည်။ Mac OS X version 10.5 နှင့်အထက်: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/ Mac OS X မတိုင်မီမူဘောင်များ / LaunchServices .framework / Support / lsregister -kill -r -domain local -domain system -domain သုံးစွဲသူ၏မူကွဲ ၁၀.၅: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/\_t lsregister \_ - kill -r -domain local -domain system -domain user ရင်းမြစ် - Lifehacker.com
Mac App Store နှင့် iOS App Store တို့၏ကွာခြားချက်များ
Mac OS X App Store ပျက်နေပြီ၊ ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းတာကတော့ငါတို့မှာ ...
Native Instruments သည် Kontakt 4.2 Beta sampler ဗားရှင်းကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်
Application Development ကုမ္ပဏီ Native Instruments သည် Kontakt sampler ၏ beta version 4.2 ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Tucan Manager, jDownloader မှရွေးချယ်စရာ
မကြာသေးမီအချိန်များအတွင်း Rapidshare သို့မဟုတ် Megaupload ကဲ့သို့သောဆိုဒ်များမှ downloads သည်လူကြိုက်များလာသည်။ သို့သော် ...
နောက်ဆုံးတွင်ရွေးချယ်ထားသောထပ်တူပြုခြင်းသည် Dropbox 1.0 RC ဗားရှင်းအသစ်သို့ရောက်ရှိလာသည်
သင်၏ Safari ဘရောက်ဇာကိုမြန်စေပါ
Safari သည်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်အကြိုက်ဆုံး browser တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သတိပြုမိနိုင်သောအရာတစ်ခု ...
သင်၏ Cheat ဖြင့်သင်၏ဂိမ်းများအတွက်လှည့်ကွက်
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကွန်ပြူတာများ၌ကျွန်တော်ကစားခဲ့ပုံ - ခလုတ်ခုံများပြောင်းပြီးကတည်းက - နှင့် ...
Mac အတွက်အခမဲ့ဒေတာဆယ်တင်ရေး application အသစ်တစ်ခု
Disk Drill သည်မည်သည့် drive အမျိုးအစားအတွက်မဆိုသတင်းအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂဏန်းခလုတ်ကို Apple Wireless Keyboard ထဲသို့ထည့်ပါ
ငါကအပြည့်အဝကီးဘုတ်တွေကိုထောက်ခံသူဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ Apple က Wireless Keyboard ကိုလျှော့ချလိုက်တာငါ့အမှားပဲ။
TCPBlock သည် Little Snitch အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်၏ Mac တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပရိုဂရမ်ငါးခုကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါက၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုသည် Little Snitch ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။
Finder Error -10810 အတွက်နောက်ထပ်ဖြေရှင်းချက်
လွန်ခဲ့သောအချိန်ကကျွန်ုပ်တို့သည်အမှား -10810 အားလွှဲပြောင်းခြင်းမအောင်မြင်သောအချိန်တွင်ရှာတွေ့နိုင်သောအမှား -XNUMX ကိုဖြေရှင်းရန်အိမ်လုပ်နည်းလမ်းအကြောင်းပြောခဲ့သည်။
MacBook Air ဒါမှမဟုတ် iPad ကဘာတွေပိုပိုပြီးရောင်းတာလဲ။
Wall Street မှလေ့လာသူများသည် Thanksgiving weekend ၏အများစုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာကြသည်။
Norman Foster သည်အနာဂတ် "Apple City" Cupertino ကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည်
ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံးဗိသုကာပညာရှင် Norman Foster နှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးကုမ္ပဏီ Apple သည်တွေ့ဆုံရန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည်။
ပွင့်လင်း applications များပိတ်ဖို့ရန် Applescript
ပွင့်လင်းသော application အရေအတွက်နှင့်၎င်းမရှိတော့သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ RAM မှတ်ဥာဏ်သည်မတည်ငြိမ်သောအချိန်များရှိသည်။
"အင်တာနက်ရုပ်မြင်သံကြား" ကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါဘာပြောနေတာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ၊ ဖြန့်ဝေသောရုပ်မြင်သံကြားသို့ ...
Acer သည် all-in-one အသစ်ကို iMac နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်
Acer သည် Apple ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများမှအမြတ်ထုတ်ထားသည့် All-in-one desktop format ကိုဆက်လက်လောင်းကစားနေသည်။
ForkLift, Finder အတွက်အစွမ်းထက်သောအခြားရွေးချယ်စရာ
Finder သည်ကောင်းမွန်သော file manager ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Snow Leopard ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် - သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိပါက ...
Jajuk ၁.၉ အေးမြ။ မြန်ဆန်သောဂီတကတ်တလောက်နှင့်၎င်း၏ထိပ်တွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်
ခရိုမီယမ် ၉.၀.၅၈၇.၀ နောက်ဆုံးသတင်းရရှိနိုင်သည့်သတင်းများနှင့်ယခုသတင်းနှင့်အတူ
Chromium 9.0.587.0 သည်နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများကိုဆက်လက်တိုးမြှင့်ရန်မျှော်လင့်သောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များပါ ၀ င်သည်။
Safari အတွက်လှည့်ကွက် - HTML5 ရှိဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်အတင်းအကျပ်
Flash ပေါ်တွင် Mac ပေါ်တွင် Flash5 ကျော်၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်အလွန်မြင့်မားပြီး Laptops များတွင်ဘက်ထရီစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးသည်။
Civilization V သည်နောက်ဆုံးတွင် Mac၊ အနည်းဆုံးနှင့်အကြံပြုလိုသောလိုအပ်ချက်များ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်
နှစ်လသာ Windows အတွက်သီးသန့်ဖြစ်ပြီးနောက်၊ Civilization V ကို Mac ၌နောက်ဆုံးတွင်ရနိုင်သည်။
ငါဒီ post ရေးသားဖို့နာရီအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပူပြီးနောက်ပူမခံစားရဘူး ...
သင့်တွင်ဒေါ်လာ ၂၄၁၀၀၀ ဒေါ်လာရှိပါကသင်သည်ဤ“ Jewel” ကိုရနိုင်သည်။
ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရသော Christie ၏လေလံအိမ်သည်ပထမ ဦး ဆုံးကွန်ပျူတာများကိုလေလံတင်လိမ့်မည်။
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနည်းပညာကုမ္ပဏီ ၅၀ အနက် ၁၅ ခုသာမိုက်ကရိုဆော့ဖ်၊ ဆမ်ဆောင်း၊ ဂူဂဲလ်၊ …“ သင်အသုံးစရိတ်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားသည်ထက်ကျော်လွန်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအရင်းအမြစ်များသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုရရှိလိမ့်မည်ဟုသက်သေအထောက်အထားမရှိသေးပါ၊
VLC Media Player ဗားရှင်းအသစ် 1.1.5
VLC Media Player 1.1.5 သည် VideoLAN မှတီထွင်ထားသောလူကြိုက်များသောဗွီဒီယိုဖွင့်စက်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူနိုင်သောယခု version အသစ်ဖြစ်သည်။
iTunes Producer၊ iTunes စတိုးတွင်တင်ရန်လင့်ခ်
မကြာသေးမီက iBookStore တွင်စာအုပ်နှစ်မျိုးတည်းကိုဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းကိုနှစ်သက်သည်၊
MailHub သည် Mac အတွက်အကောင်းဆုံး Mail plugin, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - အာရုံစူးစိုက်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်စင်အပြည့်အ ၀ ရရှိသည်
MailHub သည် Apple Mail အတွက် add-on တစ်ခုဖြစ်ပြီး MAC OSX နှင့်ပါ ၀ င်သည့်မေးလ် application ဖြစ်သည်။ အကြောင်းပါ ...
ယခု Kinect သည် Mac OS X တွင်အလုပ်လုပ်သည်
Microsoft ၏ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာကိုလွှတ်တင်လိုက်ခြင်းမရှိသောအခြားအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှကောင်းစွာလက်ခံခဲ့သည် ...
Mac အတွက် FaceTime Beta အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းမြည်သံများကိုဖန်တီးနည်း၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Mac ၏ FaceTime အတွက် beta version အသုံးပြုသူများအားလုံးကဲ့သို့ ringtone အလွန်ဆိုးရွားနေကြောင်းကိုလည်းသင်သတိပြုမိပေမည်။ ... အဲဒီမှာ "import settings" ကိုနှိပ်ပါ။ menu import ကိုပြပါလိမ့်မည်။ FaceTime ၏ဖုန်းမြည်သံများတွင်သုံးသောအသံအမျိုးအစားဖြစ်သော AIFF Encoder ကိုရွေးပါလိမ့်မည်။
ယူရို ၂၀၀ ထက်မပိုသော Macbook Air ကိုသင်လိုချင်ပါသလား
တရုတ်ကုမ္ပဏီ E-Stary သည်အာရှ၏iantရာမအလင်းတန်းသစ်၏အက်ပလီကေးရှင်းသစ်၏ပုံသဏ္forာန်ကိုရရှိနိုင်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
iPod nano 6G အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အမှုတစ်ခု
Apple က iPod nano multitouch ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးကတည်းကအမှုအရာတစ်ခုအနှေးနဲ့အမြန်ပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားတယ်။
Car Maintenance သည်သင်၏ကားကိုခြေရာခံရန်ကူညီသည်
လှည့်ကွက် - သင်၏ Push mail သည် Mac ပေါ်တွင်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သည်
Mac ပေါ်ရှိ Push mail ကို configure လုပ်ရန်သင်၏ခေါင်းပေါ်တွင်စောင်ကိုစည်းထားခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ။
၁၀ နှစ် Mac OS X အရိပ်အမြွက်
၎င်းသည် maquera အသိုင်းအဝိုင်းကိုနေ့စဉ်လှည့်ကွက်များပေးခြင်းဖြင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှေ့ဆောင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။
Berokyo သည်သင်၏ desktop ကိုစီစဉ်ရန်ခွင့်ပြုသည်
ဘလော့ဂ်အတွက်အသစ္စာအရှိဆုံးအဖြစ်ကျွန်ုပ်သိသည်မှာငါသည်၎င်း၏တိုးတက်မှုသည်အကန့်အသတ်ရှိသော်လည်း QuickSilver ၏ခြွင်းချက်မရှိပန်ကာဖြစ်သည်။
EyeTV ၏အားနည်းချက်များထဲမှတစ်ခုမှာပရိုဂရမ်အပြင်၎င်းကိုကူညီသူနှင့် daemons အမြောက်အများထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။
သင့် Mac မှာ pixel အသေများရှိပါသလား။ ဒါကမင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်
၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည် - ကုမ္ပဏီတွင်းစာရွက်စာတမ်းများပေါက်ကြားခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။
FullTube သည် YouTube ကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်
အကယ်၍ သင်သည် YouTube ဗီဒီယိုများကိုမျက်နှာပြင်အပြည့်ကြည့်ရှုနေပါက၎င်းကိုသင်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။
သုံးသပ်ချက် - စတိဗ်ဂျော့ဘ်၏အတွင်း - Apple နောက်ကွယ်မှစိတ်
ငါဒီစာအုပ်ကိုတကယ်ဖတ်ချင်ခဲ့တယ်၊ အမှန်တရားကငါ့ကိုစိတ်မပျက်စေဘူးဆိုတာ ...
ထိပ်ဖျား: သင်၏ Magic Trackpad ကိုပြောင်းပါ
ဒီ Magic Trackpad ကိုဒီ post ကို ဦး ဆောင်နေတဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းအသုံးပြုဖို့ထုတ်လုပ်ထားတယ်။
သင့်အချက်အလက်ဆုံးရှုံးမှုပြProbleနာများကိုဖြေရှင်းရန် IPhoto 11 Update
iPhoto 11 bug အတွက်ဖြေရှင်းချက်။ ။ လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်ကပြofနာကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည်။
Antares သည်မိုက်ကရိုဖုန်းမော်ဒယ်လ်ပလပ်ဂင်၏ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်သော Mic Mod EFX ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ပိုမိုကမ်းလှမ်းသည် ...
OmniFocus ကိုသုညကုန်ကျမှုဖြင့် WebDav နှင့်စည်းညှိပါ
သင်၏ဖန်သားပြင်ကို Save Screenie ဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
Blogger ကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ Mac OS X ရဲ့ shortcuts အားလုံးနဲ့လွယ်ကူစွာဖမ်းယူနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Mac အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့ Sims 3: Nightfall Now, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
The Sims3၏ console edition အပြင် Electronic Arts မှယနေ့တွင် ...
Firesheep ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Facebook ကို Hack ရန်မလွယ်ကူပါ
Firesheep သည် Firefox (Mac OS X, Windows) အတွက် extension တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။
Mac အတွက် Windows Phone7Connector ကိုယခု download ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က ... အခြေခံပြီးဖုန်းများကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏လာမည့် application အားအနည်းငယ်မျှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။
စတိဗ် Wozniak မှစီးပွားရေးကဒ်ပြား
Apple ကိုပူးတွဲတည်ထောင်သူ Steve Wozniak တွင်ကျွန်ုပ်တွေ့ဖူးသမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးကဒ်ပြားတစ်ခုရှိသည်။ ပြုလုပ်ခဲ့သည် ...
Tunnelblick, OpenVPN အတွက်ရိုးရှင်းသော GUI
Mac OS X အတွက် Lotus Symphony 3.0 အခမဲ့သုံးသပ်ခြင်း
ထို့အပြင် menu bar ၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကိုယခုအချိန်တွင်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည် ဗီဒီယိုနှင့်အသံအဖြစ်။
… Lotus Symphony 3.0 ၏အင်္ဂါရပ်များ - VBA script များကိုထောက်ပံ့သည်။ - ODF 1.2 စံပံ့ပိုးမှု။ - Office 2007 OLE ကိုပံ့ပိုးသည်။ - ဘေးထွက်ဘားအသစ်။ - toolbar ၏အကြောင်းအရာနှင့်ဒီဇိုင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ခြင်း။ - စီးပွားရေးကဒ်ပြားအသစ်များနှင့်တံဆိပ်များဖန်တီးနိုင်ခြင်း။ - OLE ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များကိုထည့်သွင်းရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ။ - Master စာရွက်စာတမ်းများအတွက်ပံ့ပိုးမှု။ - စာသားကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီထောက်ပံ့ပါ။ - Microsoft Word နှင့် Excel ဖိုင်များ၏ဖိုင်စာဝှက်ခြင်းနှင့်စကားဝှက်ကိုကာကွယ်ခြင်း။ - "၀ င်းဒိုးအသစ်ဖွင့်သည်" အတွက်ထောက်ပံ့မှု၊ သုံးစွဲသူများသည် Mac OS တွင် Command + ~ ကိုသုံးနိုင်သည်။ - အနုပညာပြခန်းမှကလစ်အသစ်များ။
GlimmerBlocker, Safari အတွက် adblock
Safari adblocker အားလုံးနီးပါးသည် plugins အသစ်များမှအပ hacks များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊ ၎င်းတို့သည်ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်သော်လည်း၊
Dracula 3: Mac OS X အတွက်ရရှိနိုင်သောနဂါး၏ Path ယခုရရှိနိုင်၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ပြင်သစ်စွန့်စားခန်းဂိမ်းထုတ်ဝေသူ Coladia က Dracula 3: The Path of the Dragon for Mac
Mac အတွက် Office 2011 ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသလား။
Microsoft Office 2011 ၏ထုတ်ကုန်များဖြန့်ချိရာတွင်အပြောင်းအလဲများစွာထဲမှတစ်ခုမှာ "activation" ဖြစ်သည်။
iFixit သည် ၁၁ လက်မ MacBook Air အသစ်ဖြစ်သော Review ကိုခွဲထုတ်သည်
၁၁ လက်မ MacBook Air သစ် iFixit စတိုးဆိုင်များမှတစ်ရက်မပြည့်ခင်…
အက်ပဲလ်သည် MacBook Air၊ iChat၊ iPhone သံလိုက်သင်္ကေတများအတွက်မူပိုင်ခွင့်များရခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ Apple သည်မူပိုင်ခွင့်ရုံးမှမူပိုင်ခွင့်များစွာရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
AutoCAD ကို Mac OS X အတွက်ရပြီ
Mac OS X အတွက်နောက်ဆုံးဇာတိ AutoCAD ဗားရှင်းထွက်ပေါ်လာချိန် မှစ၍ (၁၈) နှစ်အကြာ
Tuxera, Mac အတွက်အကောင်းဆုံးစီးပွားဖြစ် NTFS မောင်းသူ
Mac OS X သည် NTFS စနစ်ကိုဘယ်တော့မှမကြိုက်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်ဖြစ်သော်လည်းလူတိုင်းသိသည်။
Brush Pilot, Photoshop ၏ brush brush ကိုကြည့်ရှုသူ
၎င်းသည်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းကိုမရည်ရွယ်သူတစ် ဦး အတွက်သာမက၊ အသုံးချသူများအတွက်လုံးဝအသုံးမကျသောအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဟုထင်ရနိုင်သည်။
Google Books မှစာအုပ်များကိုကူးယူပါ
အချို့က Clarkson ကိုအပြောအဆိုပြုသည်၊ အချို့က ... - ဂူးဂဲလ်တွင်အရာရာတိုင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုရှိသည်၊
Mac OS X ကိုဖွင့်ရန် Keyboard ပေါင်းစပ်မှု
ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့် Mac OS X ကိုစတင်ရန်ကီးဘုတ်ပေါင်းစပ်ခြင်းများကိုစုစည်းထားသည်။
AppleJack သည် application တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားအရာအားလုံးမအောင်မြင်လျှင်သို့မဟုတ် startup disk မရှိပါကသင်၏ Mac ၏ startup ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
အလွန်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ application တစ်ခုဖြစ်သည်
နောက်ဆုံးတွင်လက်ဝဲ ၄ ယောက်သေသည်။ Mac OS X တွင်
Mac OS X ကို Steam ရောက်ဖို့အများကြီးယူခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဆင်းသက်ပြီးတာနဲ့ကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကတော့ ...
လှည့်ကွက်: Finder Error -10810 အတွက်ယာယီ Fix
အကယ်၍ သင်၏ Mac ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုပါကဒဏ္myာရီဆိုင်ရာအမှား“ Error -10810”, ...
အခမဲ့ clipboard မန်နေဂျာ ClipMenu
သင်သည် clipboard တွင်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုရှိခဲ့ဖူးပြီးအခြားအရာတစ်ခုကိုကူးယူပြီးစားပွဲပေါ်သို့ခေါင်းကိုထိခဲ့သည်
Maintenance, Automator နှင့်အတူပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
လူအနည်းငယ်ကသာ၎င်းကိုအပြည့်အဝအသုံးချသောကြောင့် Automator သည် Apple ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စေသည်။
Kernel ကို panic screensaver
Terminal နှင့် Emacs
ကစားရန် Mac OS X terminal တွင် Emacs ကိုသုံးပါ။
သင်၏ iPod, iPad နှင့် iPhone ပေါ်တွင်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ထားသောလေဆာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောထွင်းထုခြင်း
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းဖြင့်သင်၏ iPod, iPad သို့မဟုတ် iPhone ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
ယနေ့ငါမည်သည့် Mac OS X application ၏လမ်းကြောင်းသစ်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်ဟု ဆက်လက်၍ ငါဆက်လက်ပြောကြားသည်။
TotalFinder၊ သင့် Finder အတွက် tabs တွေထက်အများကြီးပိုပါတယ်
Finder သည် Mac OS X ကိုကျွန်ုပ်အဘယ်ကြောင့်ချစ်ရသနည်း။
Main နှင့်အတူသင်၏ Mac အတွက်အထူးကြပ်မတ်သန့်ရှင်းရေး
အတွင်းပိုင်း Mac OS X Snow Leopard ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများရှိသော်လည်းသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
Scribo, Mac အတွက်ကောင်းသော LaTeX အယ်ဒီတာ
သင် LaTeX (အကြောင်းအရာနှင့်မရောထွေးရန်ဖြစ်သည်) သည်မည်သည့်အရာကိုသဲလွန်စမသိနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည်။
သင်၏ Mac ကို hibernate ထားရန်နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခု
အကယ်၍ သင်က switcher တစ်ယောက်ဆိုရင်သင်လွဲချော်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ Mac OS X က ...
ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ထားသော iPad များနောက်ဆုံးတွင်ရောက်ရှိလာသည်
အက်ပဲလ်ဟာပြန်လည်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်တွေ (သို့) တူညီတဲ့ထုတ်ကုန်များစွာကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အလေ့အကျင့်ဟောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။
Join Together နှင့်အတူ iTunes သီချင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ
ငါတို့ချစ်သော Mac အတွက်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအခမဲ့အက်ပလီကေးရှင်းများဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ ယခုတစ်ကြိမ်မှာဂီတအတွက်ဖြစ်သည်။
သင်၏မိသားစုသစ်ပင်ကိုသင်၏ Mac ပေါ်တွင်ဖန်တီးပါ
အဖြစ်မှန်အတွက်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရှိခဲ့လျှင်တစ် ဦး ထက်ပိုသောကြောင့်အလွန်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ငါကြောက်သည်။
Shades, သင့် screen ၏တောက်ပမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အခြားသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်
Shades သည်တစ်ခုတည်းသော application မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ၏တောက်ပမှုကိုအပိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဟုတ်ကဲ့ ...
iTerm, Mac OS X အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ Terminal
Open Source ကမ္ဘာကြီးဘယ်တော့မှရပ်တန့်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Mac Monitor ရဲ့အပူချိန်ကို Monitor နဲ့တိုင်းတာပါ
ငါတစ်ခါတစ်လေအပူချိန်နည်းနည်းစွဲလမ်းသူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ၊ ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုဖျားနာစေတယ် ...
Dimmer၊ သင်၏ Mac ၏တောက်ပမှုကိုပိုမိုထိန်းချုပ်သည်
သင်၏ Mac သည်အလင်းအမှောင်အလုံအလောက်ရရှိရန်လုံလောက်သောအလင်းရောင်ရရှိရန်သင်၏ Mac ၏အရောင်တောက်ပမှုသည်မလုံလောက်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိပါသလား။
SMCFanControl ပန်ကာကိုထိန်းချုပ်ရန်သင်၏ Mac ပေါ်တွင်တစ်ခုထက်ပိုသောအဓိကအချက်ဖြစ်သည် ...
Applesfera မှာ alias မြှားကိုဘယ်လိုဖယ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တယ်။ အမှန်တရားကတော့ငါသိတာကို ၀ မ်းသာမိတယ်။
Stash, သင့်ဘဏ္finာရေးအတွက်အခမဲ့ application
ပုံမှန်အားဖြင့်ဘဏ္managementာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများသည် shareware ဖြစ်ရန်သာရည်ရွယ်သည်၊ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကံကောင်းသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြန်ဆုံး Mac ဖြစ်သည်
နောက်မျိုးဆက် Mac Pro များသည်စစ်မှန်သောဒေတာများကိုစီမံသောသားရဲများဖြစ်သည်၊ သို့သော်…ဖတ်ခြင်းသည်အံ့သြစရာကောင်းသည်။
မေးလ် + ဂျီမေးလ် + IMAP Idle နှင့်ပတ်သက်သောပြနာများ?
သင့်မှာ iPhone တစ်ခုရှိရင် BlackBerry ကိုကြီးကျယ်ခမ်းနားစေသည့် Push mail ကိုသင်နှစ်သက်ကောင်းနှစ်သက်လိမ့်မည်။
မင်းမှာကလေးတစ်ယောက်ရှိပြီး Mac နဲ့စချင်တယ်ဆိုရင်မင်းဘယ်ကိုသွားမှာလဲမသိဘူးလို့ငါထင်တယ် ...
တင်ပြချက်များအတွက် Keynote နှင့်များသောအားဖြင့်သင်အလုပ်လုပ်လျှင်၎င်းသည်ဖွင့်ထားသောခေါင်းစဉ်များအားသင်ငြီးငွေ့လိမ့်မည်။
သင်၏ PDF များကိုသော့ဖွင့ ်၍ သော့ဖွင့်ပါ
ဒီ utility တစ်ခုစီကိုသုံးနိုင်တဲ့အသုံးပြုမှုကိုငါမသွားဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါပဲ ...
Mac OS X ရှိ Git အတွက်ဂရပ်ဖစ် interface တစ်ခုဖြစ်သော Gitbox
ဒီဇိုင်းဗားရှင်းထိန်းချုပ်မှုထူးချွန်မှုသည် Subversion ဖြစ်ပြီး Git သည်လွန်ခဲ့သောအနည်းငယ်သောကာလကပင်ပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်နေသည်။
.PKG ဖိုင်တစ်ခုမှဖိုင်တစ်ခုကိုသင်လိုအပ်ဖူးပါသလား။ ဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့်၎င်းကိုထုတ်မရပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၂၀၀၈ နှောင်းပိုင်း MacBook Unibody မှပန်ကာသည်ဆူညံသံကိုစတင်ခဲ့သည်။
Mac OS X Tiger ရှိ Magic Mouse အတွက်ယာဉ်မောင်း
Mac OS X 10.5.8 နှင့်အတူ Apple ကွန်ပြူတာများတွင် Apple သည် Magic Mouse ကိုသာအသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။
Autodesk သည် Maya 2011 ကို Mac အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
Apple iMac Display Brightness Update 1.0 အတွက်အသုံးပြုသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
အကယ်၍ သင်သည်မကြာသေးမီက ၂၁.၅ လက်မ iMac ကိုဝယ်ပြီးကွန်ပျူတာ၏တောက်ပမှုနှင့်ပြproblemsနာများရှိခဲ့လျှင်သင် ...
Fake, developer များအတွက် browser တစ်ခုဖြစ်သည်
Firefox, Chrome, Safari, Opera နှင့် Mac OS X ရှိဘရောက်ဇာများ၏ကမ်းလှမ်းမှုသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်များအကြောင်းသိလိုလျှင်သင်၏ Mac တွင်ရှိသော traffic အားလုံးကိုသိလိုလျှင် ...
Colourware သည်သင်၏ Mac mini ကိုသုတ်ထားပြီးဖြစ်သည်
Bonjour ကို Coda ရှိ R / W ခွင့်ပြုချက်များဖြင့် activate လုပ်ရန်လျှောက်လွှာ
နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ Coda ကိုအသုံးပြုသောငါတို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချိန်နှင့်အမျှအချိန်နှင့်အမျှလုံခြုံစိတ်ချရသောအဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ချို့တဲ့သော 2008 Time Capsules များအတွက်အစားထိုးအစီအစဉ်
နှစ်နှစ်အကြာတွင် Apple ကစတင်မိတ်ဆက်မည့်အစားထိုးအစီအစဉ်တစ်ခုရောက်လာသည်။
MKVToolnix: သင်၏ Mac ပေါ်တွင် MKV နှင့်အလုပ်လုပ်ပါ
ယနေ့ခေတ်တွင်၊ မြင့်မားသောအဓိပ္ပါယ်ရှိသောအကြောင်းအရာကိုကြည့်သူမည်သူမဆို MKV ဖိုင်များနှင့်နီးပါးလုံခြုံစွာအလုပ်လုပ်သည်။
ထိပ်ဖျား: Terminal ရှိ .docx မှ .doc သို့ပြောင်းပါ
Mac OS X Terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက် ပို၍ ကျယ်သည်။
MacBook Pro နှင့်၎င်း၏ USB ports
ငါပြောမယ်ဆိုတာမင်းသိလားမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ်ယောက်ယောက်သတိထားမိလိုက်တာက Apple ...
Mac OS X 10.6.4 တွင် anti-malware ရှိသည်
သင်၏ Mac အတွက်ထောင်နှင့်ချီသောအိုင်ကွန်များ
စိတ်ကြိုက်အိုင်ကွန်များဖြင့် Mac ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်၎င်းတို့လွယ်ကူသောကြောင့်လူကြိုက်များလာသည်။
DesInstaller ဖြင့် .PKG မှဖိုင်အားလုံးကိုဖျက်ပါ
လူများ၏ Macs တွင်လူသိများသောအရာတစ်ခုမှာ .pkg packages များတပ်ဆင်ပြီး၎င်းကိုဖယ်ရှား။ မရပါ။
ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများ (Monolingual) ကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ၏အသုံးမ ၀ င်သောနေရာဖယ်ရှားပစ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ပရိုဂရမ်များစွာရှိသည်။
Safari5Tricks (II): Refresh button ကိုဖွင့်ပါ
ဒီနေ့ Safari5အတွက်သင်ယူနေတဲ့လှည့်ကွက်လေးတွေကိုအသေအချာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတော့မယ်။ ဒါကလှည့်ကွက်တစ်ခုပါ။
Safari က5လှည့်ကွက် (၁) - extensions တွေကိုသက်ဝင်စေပါ
Safari5၏အသစ်အဆန်းများအနက်တစ်ခုမှာ extension များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Apple မှအချိန်ကြာမြင့်စွာသိမ်းဆည်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင် maqueros 10 ခုကို launchd ဆိုတာဘာလဲမေးရင်၊ သူတို့ကအများဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သေချာတယ်။
ဒီနေ့ Mac နဲ့ပေါ်လာတဲ့ပြနာတစ်ခုကငါဟာ ... ထွက်ဖို့လိုတယ်။
64-bit Kernel ကို K64Enabler ဖြင့်သက်ဝင်စေပါ
Snow Leopard ထွက်လာကတည်းက Macs မှာ 64-bit kernel ရှိနိုင်တယ်။
InsomniaX: သင်၏ Mac ကိုအိပ်စက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်
ကျွန်ုပ်သည်သစ္စာရှိကဖိန်းဓာတ်သုံးစွဲသူဖြစ်သည်၊ သို့သော်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုထိုပရိုဂရမ်သည်သင့်ကို ...
GrowlMuter သည် Spotify ကြော်ငြာများကိုမှန်ကန်စေသည်။
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်က Smutefy နှင့် Spotify ကြော်ငြာများကိုဖမ်းမိခြင်းနှင့်နှုတ်ပိတ်နိုင်ခြင်းအကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။
DateLine - သင်၏ desktop ပေါ်ရှိပြက္ခဒိန်
စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောသူတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းသည်သင့်အားအခက်အခဲများစွာမှကယ်တင်နိုင်ပြီးသင်၏အချိန်ကိုမှန်ကန်စွာယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေလိမ့်မည်။
Adobe CS5 suite မှ Adobe Update Manager ဖယ်ရှားပါ
အကယ်၍ သင်သည် Adobe CS5 Suite ကို install လုပ်ထားပါက disable လုပ်ခြင်းသည်မနှစ်မြို့ဖွယ်ကောင်းသောအံ့အားသင့်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Smutefy အသံတိတ် Spotify ကြော်ငြာ
ခေါင်းစဉ်မှာဖော်ပြထားတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကတော့ဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ဘယ်လိုစပ်စုလဲ ...
Meet Flux: မတူကွဲပြားသောဝဘ်အယ်ဒီတာ
ဒီဘလော့ဂ်ကိုဖတ်တဲ့သူတွေအားလုံးမှာဒီဇိုင်းပညာရှင်တစ် ဦး ထက်ပိုပြီးငါနဲ့တူတဲ့အလုပ်မျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
MacBook ရဲ့ဘက်ထရီအသစ်က MacBook Pro ထက်ပိုကောင်းတယ်
မက္ကရိုအဘိဓါန်: « UB »အတိုကောက်
အကယ်၍ သင်သည်ခလုတ်ခုံသူတစ်ယောက်သို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်များနှင့်ပါ ၀ င်သောအတိုကောက်ဝေါဟာရများကိုများသောအားဖြင့်အာရုံမစိုက်ပါက ... ဖြစ်နိုင်သည်။
Mac အတွက်စပိန်ဘာသာဖြင့် Adobe CS5 Master Collection
Adobe CS5 သည်ယူအက်စ်တွင်ထက်ဝက်ကျော်သည်ဥရောပထက်ကုန်ကျသည်
Tube: သင်၏ Mac ပေါ်ရှိ DTT
DTT USB ချောင်းများနှင့် Mac များရှိပြproblemsနာကြီးတစ်ခုမှာယာဉ်မောင်းနှင့်ပရိုဂရမ်များမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ထိပ္ဖ်ား: MAMP ကိုအလိုအလျှောက်စတင်ပါ
Web ဒီဇိုင်းနှင့်ပရိုဂရမ်းမင်းတွင်လုပ်ကိုင်သောကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် MAMP ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
iCreate, စပိန်ဘာသာဖြင့် Apple People's Magazine
iCreate ၏ iCreate ၏ပထမဆုံးထုတ်ကုန်သည်ယူရို ၃.၅၀ နှင့်အခြားပစ္စည်းများအတွက် ၃.၉၀ ဖြင့်သာဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
MakeMKV ဖြင့်သင်၏ Mac ပေါ်တွင် Blu-Rays ကြိုးကိုဆွဲပါ
မှန်ကန်သည်မှာ Blu-Ray စာဖတ်သူနှင့် Mac ကွန်ပျူတာများမထွက်ပေါ်လာသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား mounting မှတားဆီးသည်မဟုတ်ပါ။
လှည့်ကွက် - မေးလ်တွင်ချည်နှောင်ထားသောစာများ
web interface ကိုသုံးခြင်းမှလွဲလျှင်အများဆုံးလွဲချော်နိုင်သည့်အရာများထဲမှတစ်ခု ...
DiscEject သည်သင်တို့ကိုဖမ်းထားသော discs များနှင့်ကူညီသည်
တစ်ချိန်ချိန်တွင် Mac ရှိသူတိုင်းသည်သူတို့ခံစားခဲ့ရသောအံ့သြဖွယ်အခိုက်အတန့်ကိုခံစားခဲ့ကြရသည်။
MacHacha - သင်၏ Mac ပေါ်ရှိဖိုင်များကို ခွဲ၍ ဆက်သွယ်ပါ
အခုတော့သိပ်ပြီးခေတ်နောက်ကျနေပြီ၊ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ကနေ download ဆွဲယူတဲ့အရာတော်တော်များများရောက်လာပြီ။
Silverlight ကိုသင်၏ Mac ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပါ
ဤတွင်သင်မသိသောသူများအတွက် Silverlight နှင့်အမြန်မိတ်ဆက်စကားများရှိသည်။ Microsoft Silverlight သည်ဖြည့်စွက်ရန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ iSight သို့သက်ရောက်မှုများကိုထည့်ပါ
အကယ်၍ သင်သည် Mac webcam ၏အားသာချက်ကိုရယူသောသူတို့ထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်သင်ကံကောင်းပါစေ၊
Apple ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း (၇) iMac G5
ပဲရစ်၊ ၂၀၀၄ ။ စတိဗ်ဂျော့ဘ်သည်သူ၏ခွဲစိတ်ကုသမှုကြောင့်နာမကျန်းခွင့်ကိုခံနေရသည်။
Apple ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း (V) - iMac G4
၂၀၀၂ ခုနှစ်။ Apple က၎င်းကိုကွန်ပျူတာသို့ပြန်လည်အပ်နှံရန်အချိန်တန်ပြီဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Belkin ကသင်၏ USB 3.0 ကိုသင်၏ Mac သို့ယူဆောင်လာသည်
Belkin သည် Mac အတွက်အကျော်ကြားဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးကိုစပိန်ဘာသာဖြင့် Mac ကြော်ငြာများရယူပါ
GetaMac ကင်ပိန်းကိုငါတို့အားလုံး maqueros ကဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောရင်ငါလိမ်မယ်လို့ငါမထင်ဘူး။
Sockintosh, maqueros များအတွက်ခြေနွေး
ငါတို့မသိသောအရာတစ်ခုခုရှိပါကပါဝါ adapter သည်အလွန်ပူလေ့ရှိပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင် ...
(Mac OS X အပါအဝင်) လည်ပတ်ရေးစနစ်များအားလုံးတွင်အမှိုက်ပုံးသည်ဖိုင်များကိုအမှန်တကယ်ဖျက်ပစ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနေရာလွတ်သို့…
၂၇ လက်မ iMac ပြproblemsနာကို Apple ကဖြေရှင်းနိုင်ပြီ
၂၇ လက်မ iMac ထွက်ပြီးကတည်းကမိုးအနည်းငယ်ရွာနေပြီ၊ ဒါပေမယ့်မရောက်သေးဘူး…
၎င်းသည် Mac startup အသံကိုဖန်တီးသူ Jim Reekes ဖြစ်သည်
maquero အားလုံးကောင်းကောင်းသိသောအသံတစ်ခုရှိလျှင်၎င်းသည် Mac ၏အစအ ဦး ဖြစ်သည်၊ ၎င်းတွင် ...
Apple က MacBook အတွက် hard drive ပြုပြင်ရေးအစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်
၂၀၀၆ ခုနှစ်မေလမှ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ၊ များစွာသော MacBooks များကိုကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းချခဲ့သည်။
Mac OS X သို့ပြောင်းသောအခါ switchchers အချို့၏ပထမဆုံးတိုင်ကြားချက်မှာများသောအားဖြင့်ခလုတ်ဖြစ်သည် ...
တစ် ဦး ကမီးရှို့ပစ် iMac ... အလုပ်လုပ်ပါတယ်
Mac ကမ္ဘာကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတစ်ခါတစ်ရံအလွန်သိချင်စိတ်နှင့်အမြဲအံ့အားသင့်စေသော်လည်းအမှန်တရားမှာ ...
သင်၏ Mac တွင် UIF ပုံများကိုဖွင့်ပါ
ယနေ့ခေတ်တွင်ပုံသဏ္formာန်များစွာရှိသည်။ သို့သော် Mac မှမထောက်ပံ့သောတည်ရှိမှုတစ်ခု ...
Mac OS X တွင် RAID တွင် USB drive များဖန်တီးရန်ဗွီဒီယို
သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် RAID တွင် hard drives များကိုတပ်ဆင်ခဲ့ဖူးသောသူများသည်ယုတ္တိရှိသောအရာဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်။
ကောလာဟလ: Apple က iMac အတွက်အရည်အေးအောင်စဉ်းစားနေသည်
Apple သည်၎င်းအတွက်မူပိုင်ခွင့်အားလုံးကိုမထုတ်ပြန်ဘူးဆိုတာရှင်းနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။
PowerMac G5 ကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း
PowerMac အဟောင်း ရှိ၍ ၎င်းနှင့်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ ကောင်းပြီသင်မသွားဘူးဆိုရင် ...
၂၇ လက်မ iMac ကို Apple ကဆက်လက်ထုတ်လုပ်သည်
၂၇ လက်မ iMac နဲ့ Apple မှာကိစ္စတွေကသိပ်ပြီးမများပါဘူး။
Desktop ကိုယူဆောင်လာသည့် MacTubes
များသောအားဖြင့်လူအများစုသည်ယူကျုးဘ်မှတစ်ဆင့်ယူကျုးဘ်ကို ဝင်ရောက်၍ ထိုမှဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်ကြသည်။
အဝါရောင်ဖန်သားပြင် bug ကို Apple မှအသိအမှတ်ပြုသည်
Apple မှ iMac မျိုးဆက်သစ် (အထူးသဖြင့် ၂၇ လက်မ) သည်အတွင်းပိုင်းမှတ်စုတစ်ခုမှတဆင့်အသိအမှတ်ပြုလိုက်သည်။
ထုတ်လွှင့်မှုသည် Magnet link များကိုထောက်ပံ့ပြီးဖြစ်သည်
torrent ကမ္ဘာတွင် Magnet အချိတ်အဆက်များ၏ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည်နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းဖြစ်လာသည်။
Rome: Total War Gold Edition သည် Mac OS X သို့ရောက်ရှိသည်
Mac OS X တွင်ဂိမ်းများပိုမိုလာနေသည်ကိုမကြာသေးမီကငါသတိပြုမိလာသည်။ Feral Interactive ကဲ့သို့သော developer များစတင်နေပြီဖြစ်သည်။
AppZapper သည် 64-bit bits ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
Mac OS X တွင်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို uninstall လုပ်ရန်သည်အလွန်လွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိသော်လည်း၎င်းသည်အားနည်းချက်ရှိသည်။
Apple Tablet ကိုကြည့်ချင်သူတွေအတွက်ဂရပ်ဖစ်ဟာသတစ်ခု
ဘာသာပြန်ချက် - ဂျဲနီ -“ မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပုလင်း၏မျိုးရိုးဗီဇဖြစ်ပြီး၊ သင်၏ဆန္ဒတိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။
InkLet, trackpad ကိုဒီဂျစ်တယ်တက်ဘလက်အဖြစ်ပြောင်းသည်
ပထမ ဦး ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကရေရှည်ဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။
WineBottler သည် Mac OS X ရှိ Wine အတွက်အကူအညီဖြစ်သည်
Macqueros အများစုသည် Mac ပေါ်တွင် Windows အကြောင်းတစေ့တစောင်းသိရန်တွန့်ဆုတ်ကြသည် (ငါပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သည်)၊
Jitouch2သည် Multitouch တိုးတက်စေရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်
Multi-touch trackpad သို့မဟုတ် Magic Mouse ပါသည့် MacBook ပိုင်ရှင်အားလုံးသည်၎င်းတို့ကိုခွင့်ပြုသည့် software ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
QuickBoot, BootCamp စတင်မှုကိုအရှိန်မြှင့်
BootCamp မှာပုံမှန်လား။ အကယ်၍ အဖြေကဟုတ်ကဲ့လျှင်၊ တစ်ခါတစ်ရံသင်ရှိခဲ့ပါကထိုအရာသည်ကြီးလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်မိနိုင်သည်။
SwarmQuery သည် torrent များကိုရှာဖွေရန်ကူညီသည်
torrent ဖိုင်များမှတဆင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသည်သင်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုလျှင် SwarmQuery တွင်သင်နှင့်မဟာမိတ်တစ်ခုရှိသည်။ ဒီပရိုဂရမ်…
သင့် iPhoto စာကြည့်တိုက်ကိုဂရုစိုက်ပါ
အကယ်စင်စစ်များစွာသော maqueros iPhoto တွင် 20 သို့မဟုတ် 30 GB ကိုကျော်ဓာတ်ပုံများရှိသည် (နှင့်အချို့သောနှစ်ဆသို့မဟုတ် ...
ဒီနေ့မှာငါ session တစ်ခုလုပ်ဖို့၊ ငါ့ Mac မှာအသံဖိုင်များစွာနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ရတယ် ... ငါသဘောပေါက်လာတယ်။
ကြော်ငြာကိုနှိပ်ပါ။ Mac vs. Windows vs. Linux
သင်၏ Mac ကိုမည်သည့်နေရာမှမဆိုထိန်းချုပ်လိုပါက Screen Sharing function ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်။
ထုံးစံ LEGO packs ကိုတည်ဆောက်ပါ
အကယ်၍ သင်ဟာ LEGO ကိုနှစ်သက်ပြီးသင်တစ်နေ့လုံးကုန်ပစ္စည်းများကိုတည်ဆောက်ပြီး ...
သင်၏ multi-touch Mac တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော BetterTouchTool
သင် multi-touch trackpad ပါသည့် Mac ရှိပါကသို့မဟုတ်သင် Magic Mouse ကို ၀ ယ်ယူခဲ့လျှင်၊
အမေရိကန်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီ Apple တွင် Jeff Dauber သည်မိုဘိုင်းလ်စနစ်များတွင်ဒါရိုက်တာအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်သည်။
Apple ရဲ့ Serial နံပါတ် Info, သင့် Mac ကိုသိ
ဝဘ်တွင် Apple ၏ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံး ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုအမြောက်အများကိုရှာတွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်ဤအရာသည်ငါထင်နေသည်။
အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက Jailbreak လုပ်ထားတဲ့ iPhone ကိုပျက်စီးစေတယ်
iPhone အတွက် SSH network protocol တပ်ဆင်ထားသည့် Jailbreak ပါ ၀ င်သော iPhone အတွက်ပထမဆုံးတီကောင်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။
၂၇″ iMac ကိုမော်နီတာအဖြစ်အသုံးပြုရန် Apple ကသင်ကြားသည်
၎င်းသည်အပြင်းထန်ဆုံးချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံရသည့်ပြပွဲများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအချို့သည်အရှည်ဆုံးစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြသော ...
IMac 27″ မျက်နှာပြင်ပြproblemsနာများ
သင်၏ Mac တွင် Chrome OS ကိုသုံးပါ
ကျွန်ုပ်သည်ဂူဂဲလ်ခရုမ်း OS ကိုကြိုးစားခဲ့သူများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ယခုကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်ပြောနိုင်ပါပြီ။
Boot Camp သည်အဆင့်မြှင့်တင်မှုကိုရရှိသည်
Boot Camp သည်အချိန်ကာလတစ်ခုအကြာတွင်အသစ်အဆန်းတစ်ခုကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
အရေးအပါဆုံးပရင်တာအမှတ်တံဆိပ်အချို့အတွက်ယာဉ်မောင်း updates များကိုမကြာသေးမီက Cupertino မှထွက်ပေါ်လာသဖြင့် ...
iMac G3 အဟောင်းကိုသာရီရီရီယမ်အဖြစ်ပြောင်းခြင်း
Apple ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုစတင်ခဲ့သောကွန်ပျူတာသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအခြေအနေသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒါကအကျဉ်းချုပ်ပါလိမ့်မယ် ...
Hard drive (S-ATA 2) ကို MacBook Pro 15″ 2006 သို့ပြောင်းပါ
hard drive နှင့် memory ကို MacBook သို့မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြပြီးဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ။
အသစ်က Apple Remote အပေါ်သိချင်စိတ်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါထင်သည်မှာ Apple Remote အသစ်သည်ယခင်ယခင်ထက်အများကြီးပိုပျော့ပြောင်းသည်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးတော့ထင်မြင်ချက်ဖြစ်သည်။
၁၃ လက်မအရွယ်ရှိ MacBook များတွင်ဘုံအမှားဖြစ်နိုင်သည်
၁၃ လက်မအရွယ်ရှိ MacBook ၏ပိုင်ရှင်အနေဖြင့်ကျွန်တော်စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ အကြောင်းမှာ Appleism တွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုသည့်အတိုင်း…
Onyx သည် Snow Leopard ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကောင်းမွန်စေသည်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ Mac တွင် Leopard နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုရှိခဲ့ပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်၎င်းသည် Onyx ဖြစ်သည်။
၂၇ လက်မ iMac အသစ်နှင့်ပြနာများ
Jonathan Ive ကသူ့ဂူကိုနည်းနည်းပြတယ်။
၂၇ လက်မ iMac အသစ်၏အထွ.်အထိပ်
iFixit မှသူများသည်ယခုတွင် Apple ၏အကောင်းဆုံးဖြန့်ချိမှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ကိုလက်ကိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
ထိပ္ဖ်ား: Bluetooth ပေးပို့ခြင်းကိုလျင်မြန်စွာအသုံးပြုပါ
ဖိုင်များကိုမိုဘိုင်းဖုန်းသို့ပို့ရန်သင်၏ Mac ၏ Bluetooth ကို အသုံးပြု၍ ဖြစ်နိုင်သည်။
ပြotနာများ Spotify မှဖြေရှင်းချက်
ယူဆရသည်မှာများစွာသော Spotify ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းနေပြီး၊
စွမ်းဆောင်ရည် Update ကို 1.0
အခြားအပြုအမူများမှ လွဲ၍ သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ hard drives နှင့်ကြုံတွေ့ရသောပြtheနာအားလုံးမှမိုးရွာနေပြီဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး QuickLook Plugins (XII): Animated GIFs
အကယ်စင်စစ်သင်သည်အစဉ်အဆက် Preview နှင့်အတူပုံမှန်ရယ်စရာကာတွန်း gif ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်နှင့်သင်ရိုးရိုး ... မြင်ကြပြီ
Corrector နှင့်အစားထိုးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အလွန်မနှစ်သက်သောအရာမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာအချို့အစီအစဉ်များအတွက် ...
အကယ်၍ သင်သည် Snow Leopard အသုံးပြုသူဖြစ်ပြီးသင် MacBook သို့မဟုတ် MacBook Pro ရှိပါကသင်ဘယ်နေရာကိုသိဖို့စိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မည်။
HP Envy 13 နှင့် HP Envy 15 Laptop၊ Apple ၏ MacBook Pro နှင့် Macbook Air တို့၏ပြိုင်ဆိုင်မှုလား။
HP သည် Apple ၏ MacBook Pro နှင့် Macbook Air ကဲ့သို့ပြည်သူလူထုကိုရည်ရွယ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဒီဇိုင်းဆွဲသည့် laptop နှစ်လုံးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Apple ကုမ္ပဏီသည်ဘောင်းဘီအားပြိုင်ဘက်အသစ်နှင့်ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ရန်လိုလိမ့်မည်လော။
IPod Classic ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်
Apple သည်၎င်း၏ရိုးရှင်းသော iPod များပေါ်တွင် software update များကိုပြုလုပ်ရန်မလွယ်ကူသော်လည်းယခုတစ်ကြိမ်တွင်…
တခါတရံကျွန်ုပ် Mac ၏မူလ application များတွင်နားမလည်နိုင်လောက်အောင်နားမလည်နိုင်သောအရာများပျောက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသော်လည်း ...
၎င်းသည် Windows တွင်အသုံးအများဆုံးသောခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Mac တွင်မသုံးလျှင်၎င်းသည် ...
Snow Leopard အတွက် NTFS Mounter
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac တွင် NTFS disk များသို့စာရေးခြင်းသည်များသောအားဖြင့်အချို့သောစစ်ပွဲများဖြစ်လေ့ရှိသော်လည်း၎င်းသည် ...
မည်သည့် Mac တွင်မဆို 'remote disk sharing' ကိုဖွင့်ပါ
ဤသည်မှာ MacBook Air ပိုင်ရှင်များသည်လုံခြုံမှုရှိရန်လိုသည်၊ သို့သော်သူ့အတွက် ...
iPod Shuffle, တူညီတဲ့ iPod, စျေးနှုန်းလျော့နည်း
မကြာသေးမီကမှ၎င်း၏ထူးခြားချက်အသစ်နှင့်အတူ iPod ကိုအသစ်တဖန်ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်းသည်ယုတ္တိမရှိပေ။
ScreenFlow2သည် Camtasia နှင့် QuickTime X တို့အတွက်အစားထိုးဖြစ်သည်
QuickTime X သည်ရုပ်သံထုတ်လွှင့်သူများအတွက်စျေးကွက်ကိုယခုအချိန်အထိပြောင်းလဲသွားပြီဟုပြောရန်ရှေ့ဆက်ပါ
ထိပ်ဖျား: Snow Leopard ရှိ Root အသုံးပြုသူကိုသက်ဝင်စေပါ
သုံးစွဲသူများကို root မပါဘဲ UNIX အခြေခံစနစ်ရှိခြင်းသည် ...
QuickTime X အတွက် ဦး စားပေး Panel ကို
QuickTime X သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးပြီးပြည့်စုံသောလည်ပတ်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့်ပြီးပြည့်စုံသောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်ခုခုပျောက်နေသည်။
Snow Leopard ရှိ PowerPC application များ
Snow Leopard တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Intel Mac အတွက်လိုအပ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များအနည်းငယ်ရှိသော်လည်း application တစ်ခုရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။
ကောလာဟလ - MacBook အဖြူသည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းပြန်ကောင်းလာနိုင်သည်
နှင်းကျားသစ်နှင့် 64 bit
Snow Leopard ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းတွင်ဤပြThisနာသည်ကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
Apple က Remote Desktop client ကို update လုပ်တယ်
၎င်းသည် Apple ၏လည်ပတ်ရေးစနစ်များအတွက်အသုံးဝင်ဆုံးအသုံးအဆောင်များအနက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
New MacBook Pros များတွင် Apple သည် Hard Drive ပြProbleနာများကိုဖြေရှင်းသည်
MacBook ရှိ hard drive များ၏ပြtheနာကြောင့်၎င်းသည်အနှေးနှင့်အမြန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့၏။
Urban Terror: သင်၏ Mac အတွက်အခမဲ့ဂိမ်းတစ်ခု
သူတို့ရဲ့ Mac ကိုသုံးတဲ့လူအများစုကဂိမ်းကစားဖို့အသုံးမပြုကြပါဘူး။
ထိပ္ဖ်ား: installation wizard ကို AppleScript ဖြင့်အင်အားသုံးပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac များပေါ်တွင် installation wizard အားအတင်းဖိအားပေးရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက်တစ်ခုမှာ AppleScript မှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး QuickLook Plugins (IV): EPS ဖိုင်များ
အခြားတစ်နေ့တွင်ကျွန်တော် QuickLook အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော option တစ်ခုဖြစ်သည့် ZIP များကိုတွေ့ခဲ့ပြီးယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုမည်။
ပြင်ပ drive တစ်ခုအားထုတ်ပယ်ခြင်းမှတားဆီးသော program ကိုရှာပါ
သင်၏ပြင်ပ disk နှင့်သင်၏ disk ကိုထုတ်ရန်တစ်ကြိမ်မဟုတ်နှစ်ခါမဟုတ်ပါ။
LimeWire, Mac အတွက် P2P ရွေးချယ်စရာ
မင်းတို့သိတဲ့အတိုင်းငါကဒီမှာ Macs အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ပရိုဂရမ်တွေကိုဒီမှာထည့်ဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေတယ်၊
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ Apple ပြိုင်ပွဲ
ယခင်ပို့စ်တွင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးသည်မှာ "အက်ပဲလ်ကမိုက်ကရိုဖုန်းကိုလက်တော့ပ်မုဆိုးများပြီးအောင်လုပ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းလား" ကီဗင်တာနာ၊
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးကျောင်းသားများက Apple နှင့် Universia တို့ကိုပေါင်းစည်းခဲ့သည်
ဒီ post ကိုဖတ်တဲ့အခါတစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ပြောလိမ့်မယ် "ဒါကပုံပြင်ဟောင်းပဲ" ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှမမှတ်မိတော့ဘူး ...
iPhone 3GS ၏ oleophobic လွှမ်းခြုံမှုကိုအချိန်မတိုင်မီပျက်စီးခြင်း
မကြာသေးမီကဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် iPhone 3GS တွင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ပြtheနာကိုဖယ်ရှားရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။